सृजनाको चौतारी Archives - Chautari Post Online
- अशोक सुवेदी सन्तबहादुर, एकातिर झुलिरहेको छ संसदीय खोटो समाजवाद र भित्र्याइरहेछ लगानीबिनाको मुनाफा अर्कातिर मूर्छित् छन् सहिदका सपना र बाँचिरहेको छ समय प्रतिबन्धित जीवन मुलुकमा द्वैधसत्ता चलिरहेको समयमा एउटा हुरीले ल्यायो तिम्रो भौतिक समाप्तिको अप्रिय खबर सन्तबहादुर, जलाइए पनि तिम्रो हाडखोर हुँदैन सन्तबहादुरहरुको मृत्यु भाँचिँदैन मेरो गाउँको मेरुदण्ड । नयाँ घरका जगहरूमा खाँदबारी, बोदने र माझाटारका माटोका कणकणमा कहाँ छैन तिम्रो उपस्थिति अर्थात् भनौँ को चढेन तिमीले बोकेको डोली र उलिन्काठ को बसेन तिम्रो काँध र पिठ्युँमा र कसको बिहेमा सजिएन तिम्री दुहिताको कम्मरको कलश ? सन्तबहादुर, अर्थात् मेरो थलोका सन्तबहादुरहरू कहिले हलोमा कहिले डोलीमा कहिले उलिन्काठमा कहिले दाँदेमा कहिले लिँडुल्कोमा बारीमा, खेतमा छानामा, हिलो र धुलोमा मर्दा मलामी, पर्दा जन्ती ऊ हो सन्तबह
Jul132019 by Chautari Post OnlineNo Comments
२०६ औँ भानु जयन्ती मनाईदैं , कविगोष्ठी सम्पन्न
खबर, सृजनाको चौतारी
मेचीनगर । भानु साहित्यिक प्रतिष्ठान, कृष्ण–पवित्रा उप्रेती प्रतिष्ठान तथा हेमराज–मेदनी खरेल प्रतिष्ठान एक ठाउँमा मर्ज भएपछि पहिलो पटक भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा विविध कार्यक्रम शुरु भएको छ । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०६औँ जन्म जयन्तीका अवसरमा शनिबार झापाको मेचीनगरमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वृहद साहित्य गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । यसवर्ष प्रतिष्ठानले झापाको मेचीनगरमा असार २७, २८, र २९ विविध कार्यक्रमका साथ भानु जयन्ती मनाउने निर्णय अनुसार कविगोष्ठी आयोजना गरेको हो । काँकरभिट्टा क्याम्पस परिसरमा सम्पन्न कवि गोष्ठीमा स्वदेश एवम् विदेशका दुई दर्जनबढी स्रष्टाले आ आफ्ना रचना पाठ गरेका थिए । कवि गोष्ठीका प्रथम, दोस्रो, तेस्रो तथा सान्तवना हुने स्रष्टाले नगद क्रमस नगद १० हजार ७ हजार ५ हजार र २ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरुको नाम आइतबार भानु जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्र
प्रीय कमरेड ! तिमी थुनिएको शहरमा छु
- केएल पीडित प्रीय कमरेड ! प्रीय सुदर्शन !! तिमी थुनिएको शहरमा छु तिमी डामिएको शहरमा छु र, चुपचाप चुपचाप हेरिरहेछु अनेक खेल र चलखेलहरु !! हेरिरहेछु अनेक ताल र जालझेलहरु ……………. थुनेर तिमीलाई फलामे खोरमा मेरा नायकहरु/मेरा कमरेडहरु सिसमहलमा दिपावली गरिरहेछन् चियर्स गरिरहेछन् ! र, छादिरहेछ्न् सहिदका तस्वीरहरुमा हुलुलु, हुलुलु !! ………… जुनदिन मेरै अघिल्तिरबाट घिसार्दै घिसार्दै तिमीलाई नख्खु पुर्‍याए मेरा कमाण्डरहरुले प्रीय कमरेड ! प्रीय सुदर्शन ! सुल परेको थियो मेरो मुटुमा त्यसदिन विचलित छु म त्यसदिनदेखि !! अचेत छु म त्यसदिनदेखि !! ……………………………… सम्झेर अहिले तिमीलाई रुँदै र धिक्कार्दै आफूलाई बागमतिमा सेलाइरहेछु तिमीले दिएका प्रीय सपनाहरू ए अथक योद्धा ! ए प्यारो कमरेड !! ए सुदर्शन !!! मलाई माफ गर है !! म विचलित छु !! म अचेत छु !! ……….. थुक्क म ! मर्न नस
मदन पुरस्कार गुठीले ‘मदन पुरस्कार–२०७५’ का लागि सातवटा कृति छनोट गरेको छ । मदन पुरस्कार प्रदान गर्न ‘श्रेष्ठ–सूची’ तयारीका लागि गठित समितिले विभिन्न विधाका सात कृति पुरस्कारका लागि छनोट गरेको मदन पुरस्कार गुठीले बुधबार जनाएको छ । पुरस्कारका लागि प्राप्त २५७ कृतिबाट सात कृति छनोट गरिएको हो । छनोटमा परेका उत्कृष्ट कृतिमा सानु शर्माको ‘एकादेशमा’, विन्दु शर्माको ‘ओक्कल दोक्कल पिपल पात’, कुमार नगरकोटीको ‘ज्ञ’ र छुदेन काविमोको ‘फातसुङ’ रहेका छन् । त्यस्तै, छनोटमा परेका अन्य कृतिमा महेश थापाको ‘मरीचिका’, योगेश राजको ‘रणहार’ र ध्रुव सापकोटाको ‘विचारको लाश’ रहेका छन् । छनोटमा परेका यी सात कृतिमध्ये एउटा ‘मदन पुरस्कार–२०७५’बाट पुरस्कृत हुनेछ । पुरस्कारको राशि २ लाख रुपैयाँको रहेको छ ।
किताब पढ्नेहरुमा धैर्य कम हुँदै गएको छ : डा जीवन क्षेत्री
सृजनाको चौतारी, स्वास्थ्य
डा जीवन क्षेत्री प्याथोलोजिस्ट हुन्। चिकित्सा पेसासँगै उनी लेखन र पठनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा लेख लेखिरहने उनले पठन संस्कृतिको विकास होस् भनेर ‘डबली’ नामक क्याफे खोलेका छन्। स्वास्थ्यखबरको जीवनशैली स्तम्भका लागि बुनु थरुले गरेको पुस्तक वार्ताः अहिले के पढ्दै हुनुहुन्छ? मैले पठनलाई विविध बनाउन पछिल्लो समय पोड्कास्ट सुनिरहेको छु। म इतिहासविद् माइक डन्कनको ‘रिभोलुसन्स्’को एपिसोडहरु सुनिरहेको छु। त्यसबाहेक अरुन्धती रोयको ‘द मिनिस्ट्री अफ अटमस्ट ह्यापिनेस्’ पनि पढिरहेको छु। हालसालै श्रद्धा घलेको ‘द वेवार्ड डटर’ पढेर सिध्याएँ। कस्ता खालका पुस्तकहरु पढ्न रुचाउनुहुन्छ? म फिक्सन र ननफिक्सन पढ्न रुचाउँछु। पहिलाचाहिँ बढी फिक्सन पढ्थेँ। पछिल्लो समय आफ्नो काम लेखाइ, चासोसँग सम्बन्धित हुने भएकाले ननफिक्सन बढी रुचाउँछु। कसरी समय निकाल्नुहुन्छ? म आफ्नो काम हेरेर फुर्
Jul12019 by Chautari Post OnlineNo Comments
देवी पराजुली आजकल धान दिवस एक उपहास भयो , खेतमा रोप्नु पर्ने वीऊको सत्यनास भयो । मानो खाई मुरी उब्जाउने ती कृषकलाई , वाहियात दिवस मनाएको आभास भयो । फेसबुकबाट
वितेका तीन महिनादेखि अफिस टाइममा उसको र मेरो भेट हुन थालेको छ । बस छुट्ला भनेर कहिलेकाँही म खाना पनि पूरा नखाई बसस्टपतिर दगुर्छु । तर बस भीड भएको रहेछ भने पनि उसले एउटा रुमाल राखेक िहुन्छे बसको सिटमा । म बसभित्र पस्नासाथ उसले मलाई इशाराले बस्न भन्छे । म मौन स्वीकृतिका साथ बस्छु । मेरो यात्राको आधा घण्टामा मेरो अफिस आइपुग्छ । उसको र मेरो भेट भएको तीन महिनादेखि हो । तर पनि हामीबीच कहिल्यै पनि कुराकानी हुँदैनथ्यो । अफिस जाने समयमा मात्र होइन फर्कने समयमा पनि हामीबीच यसै गरी भेट हुनेगर्छ । बाहिरीरुपमा उसको बारेमा भन्नुपर्दा मेरो अनुमानमा ऊ जागिरे युवतीजस्तो लाग्छ । हाम्रो यात्राको आधा घणको भेटमा जहिल्यै पनि ऊ झ्यालदेखि बाहिरपट्टि एकोहोरो हेरिरहेकी हुन्छे । एक दिन अचानक अफिसबाट फर्कँदा बस बिग्रिएकोले हिँड्नुपर्ने हुन्छ । म कुनै अरु गाडी आउलाकि भनेर बसस्टपमा कुरिरहेको हुन्छु । ऊ पनि त्यहीँ आ
Jun282019 by Chautari Post OnlineNo Comments
सहर चकमन्न छ । औँसीको कालो रातले छपक्कै छोपेका सहरका गल्लीहरु निरोकार देखिन्छन् । बेलाबेलामा भुस्याहा कुकुरहरुको स्वरले सहरको सहरियापनलाई फितलो बनाएजस्तो लाग्छ । एक्कासि मेरो कोठानजिकैको तलको गल्लीमा केही आवाज आएजस्तो लाग्छ । म उठ्छु र झ्याल खोल्छु– एक युवती । म छक्क पर्छु मध्यरातमा एक्लै ती युवतीलाई देखेर । म फटाफट तल झर्छु र उसको छेउमा पुगेर ठिङ्ङ उभिन्छु । गोरो वर्णकी बीस–पच्चीस वर्षकी ती युवतीको अनुहारमा डर होइन आक्रोश थियो । उसका आँखाहरुमा निराशा हैन आन्दोलित लप्काहरु तरङ्गित भइरहेका थिए । आपैmँमा एउटा हिम्मत र साहसजस्ती उसले मलाई प्रश्न गरी– ‘तपाईँ को हो ?’ मैले सहजै बताएँ– ‘म विमल’ । ‘अनि यो मध्यरातमा किन ?’ उसको यो सोधाइले म आपैmँ चकित बनेँ । जुन प्रश्न मैले उसलाई गर्नुपर्ने थियो त्यही प्रश्न उसले पो गरी । तैपनि मैले भन्नु नै थियो– ‘होइन, तपाईँ यहाँ ... ?’ मेरो प्रश्नमा विराम
एसपी आसा, साहित्यकार नेपाली साहित्यमा ३० भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित गरेर योगदान दिइसकेका ७५ वर्षे जवानको नाम हो– श्रीप्रसाद उपाध्याय घिमिरे । तर, उहाँलाई यो नामले थोरैले मात्र चिन्छन्, धेरैका लागि त एसपी आसा लोकप्रिय छ । उहाँ जबान किन हुनुहुन्छ भने सोसल मिडियाको वालदेखि कापीका पानाहरुसम्म उहाँ सक्रियका साथ लेखिरहनुभएको छ । १५ वटा उपन्यासका लेखक आसाका ऐतिहासिक साहित्यिक कृति पृथ्वीनारायण शाहलगायत निकै लोकप्रिय छन् । प्रस्तुत छ, एसपी आसासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि यदुप्रसाद भट्टले गरेको कुराकानीः –एसपी आसाभन्दा त डीआईजी आसा वा आईजीपी आसा ठूलो हो नि, होइन ? (मजाको हाँसो) हो नि, एसपीभन्दा पक्कै पनि डीआईजी वा आईजीपी नै ठूलो हो । तर, साहित्यमा एसपी आसा पनि सानो चाहिँ छैन । यो प्रहरीको एसपी नभई साहित्यको एसपी हो । प्रहरीमा एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, आईजीपी होलान् । मेरो सन्दर्भमा त्यस
Jun222019 by Chautari Post OnlineNo Comments
कुमार भट्टराईको ‘अश्वत्थामा’ विमोचित
मेचीनगर । मेरो रेडियो शनिश्चरेको प्रबन्ध निर्देशक, पत्रकार कुमार भट्टराईले लेखेको कृति अश्वत्थामाको आज बिर्तामोडमा विमोचन गरिएको छ । विमोचन समारोहमा साहित्यकार गणेश रसिकसहित लेखक भट्टराईले अश्वत्थामा उपन्यासको विमोचन गरेका हुन् । भट्टराईको यो छैठौं कृति हो । यसलाई साङ्ग्रिला प्रकाशनले बजारमा ल्याएको हो । कृतिको मूल्य ४९५ रुपैयाँ राखिएको छ । भट्टराइले अश्वत्थामाको जन्म कसरी भयो भन्ने कुरालाई जोड्दै विभिन्न कृतिहरुको अध्ययन पछि यसको उठान गर्न बल पुगेको बताए । अश्वत्थामाले कृष्ण धरावासीको ‘राधा उपन्यास’, राधाकृष्ण मैनालीको आत्मकथा ‘नलेखिएको इतिहास’सहित पौराणिक ग्रन्थ ‘महाभारत’ पढ्दा उत्खनन गर्न बाँकी रहेको पाटोलाई प्रस्तुत गरिएको लेखकको भनाई छ ।